warkii.com » Xog: MD Farmaajo oo Kheyre isku furtay & Sirta Mooshinka lagu boobsiiyay
Xog: MD Farmaajo oo Kheyre isku furtay & Sirta Mooshinka lagu boobsiiyay
isku gambsho badan is Marxabaysi kala marxabaysi ah iyo isku ujeedo kala ujeedo ah maanta ayuu Bamkii siyaasadeed ee sacabada la isku saaray qarxay waxaana soo baxay wajiga rasmiga ah ee siyaasada soomaaliya iyo danaha kuwa sida maldaha u adeegi jiray shacabkana waji kale mar walba u soo bandhigi jiray.
Waxaa Maanta si kadis ah ku soo baxay mooshin hoosta la isku soo galiyay oo gudoonka Baarlamaanka soomaaliya uu oday ka ahaa kaasi oo xilkiisa uu ku waayay Mudane Xasan cali khayre Ra’iisul wasaarihii soomaaliya.
Hadaba Maxuu Sababsaday Ra’iisul wasaaraha? Goormee ayuuse soo bilawday Qorshahaan shaatiga midnimada loo galiyay.?
Dhamaadkii sanadii taktay ee 2019 waxaa jiray dadaalo iyo safaro uu Ra,iisul wasaare khayre ku bixiyay Deegaanko badan oo soomaaliya ah si gooni ah Puntland,Galmudug iyo koonfur galbeed waxaana door libaax leh uu Xasan Cali khayre ka qaatay yagleelida Galmudugta Cusub.
si wayn ayay xukuumada Ra’iisul wasaaraha ugu guulaysatay siyaasada arimaha dibada iyada oo dunida soomaaliya ay u aqoonsatay dal la qabsan kara dunida casriga ah kaabigana waxaa loo saaran yahay in dalka daynta laga cafiyo.
Xukuumada Ra’iisul wasaaraha waxa ay hanatay quluubta inta badan shacabka soomaaliyeed waxaana uu xasan cali khayre xigtaystay Dhalinyarada iyo ciidamada taasina waa mid ay dalalka darisku ku tilmaameen tusaale looga dayan karo soomaaliya.
Xasan cali khayre ayaa dad badan oo siyaasada si wayn ugu xeel dheer waxa ay ku tilmaameen marar badan hagaha siyaasada Madaxweyne Farmaajo waxaana lagu xantaa in uu yahay Musharax u taagan Xilka Madaxweynaha Soomaaliya 2020/2021 walow uusan afkiisa ka shaacin.
in dhawaala waxaa jiray warar aan la baan buunin oo sheegayay in qilaaf xoogan uu ka dhax jiro MD Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare khayre Waxaana khilaafkaan uu ahaa mid salka ku haya arimaha doorashooyinka oo MD Farmaajo uu ku dhagan yahay go,aanka ah Doorasho qof iyo cod oo aan ku dhici karin mudada ka dhiman xi hayntiisa waxaana uu arintaan ugu xusul duubaya Hogaamiyaha Dalka Mudane Farmaajo in uu helo mudo kordhin ugu yaraan 1sano ah.
Khilaafkaan ayaa Banaanka yimid 9-bishaan aynu ku jirno ee julay maalinimo khamiis ah xiligaas oo Xasan Cali khayre uu Shir gudoomiyay Kulanka Golahiisa Wasiirada Waxa uuna sheegay in aysan aqbali doonin doorasho waqtigeeda kadib marka isaga oo sababta ku sheegay in qalqal dalka ay u horseedi karto.
Ku dhawaaqista Khayre ee arintaan waxa ka horeeyay Kulan uu Godoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan muqdisho kula qaatay Madaxweynayaashii kursiga kaga horeeyay Madaxweyne Farmaajo si gooni ah Xasan sheekh iyo sheekh shariif oo ah hogaamiyaashada Madaxda Xisbiyada Qaran si weyna u diidanaa nidaamka Villasomaliya ee Doorasho qof iyo cod ah.
Kulankaas ayaa la sheegay in Gudoomiye Mursal uu Madaxda u soo bandhigay in ay aqbalaan in dalka doorasho qof iyo cod ah la gaarsiiyo taasi oo ku imaan karta mudo kordhin iyakana ay helaan Ra’iisul wasaare oo xilka laga Xayuubiyo Mudane Xasan Cali khayre.
Xasan sheekh iyo sheekh Shariif ayaa arintaan qalinka ku duugay waxaana ay dib uga gurteen hadaladii dhaliisha ahaa ee looga bartay.
Xasan cali khayre ayaa si hoose xariir wanaagsan ula bilaabay Madaxda Maamul goboleedyada oo 11-bishaan uu shir uga Furmay Magaalada Dhuusa-mareeb si ay xooga u saaraan in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah tani ayaana ah tilaabo uu u qaaday Xasan cali khayre xagal daacinta rabitaanka Madaxweyne Farmaajo ee Doorasho qof iyo Cod ah.
14-julay Xasan cali khayre ayaa gaaray Magaalada Dhuusa-mareeb waxaana uu kalamo albaabadu u xiran yihiin la qaatay Madaxda maamul goboleedyada oo uu ka daadajiyay Fikirka ah in dalka aan doorasho qof iyo cod ah laga qaban karin xiligaan isaga oo dhanka kale ka tusiyay mudo kororsi in uu sababi karo qalqal amni iyo xasarado ka kaca Dalka.
19-julay Madaxweyne Farmaajo ayaa gaaray Dhuusa-mareeb oo ay ku sugan yihiin Ra’iisul wasaare khayre iyo qaar ka mid ah madaxda Maamul goboleedyada waxaana durbadiiba Bilawday kulamo lagu doonayay in la is kugu soo dhaweeyo Dhinacyada oo si wayn ugu kala fogaa hanaanka doorasho dalka ka dhacda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku soo dhacay Dhabin Xarkaha loo adkeeyay oo dhacsan in dalka uu san marnaba aadin doorasho qof iyo cod ah hadii xal laga doonayo siyaasada Soomaaliya.
Kulamo Ruugaga la isku aastay oo ugu yaraan 6-saacadood midkiiba qaatay Madaxamed Cabdullahi farmaajo ayaa marsiin waayay Madaxda Maamulada in ay ogolaadaan in Doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka dhacdo.
Dhankiisa Ra’iisul wasaare khayre ayaa ilaa iyo dhawr kulan oo gooni ka ah kulamada guud la qaatay Madxada Maamul goboleedyada taasi oo sida aan xuuraansi ku helnay shaki ku abuurtay Madaxweyne Farmaajo.
Arinta doorashada oo guntiga Dhiisha la is kaga dhigay MD Farmaajo ayaa ka lug baxsaday Dhuusa-mareeb isaga oo xambaarsan fariinta wax yaabihii uu kala soo kulmay Caasimada Galmudug.
Hogaamiyaha Dalka ayaa hoygiisa ku qaabilay la taliyaashiisa gaarka ah iyo xubno kale waxaana ilo hose ay sheegeen in la is tusiyay in caqabad hanaanka Doorasho ee Villasomaliya uu ku yahay Xasan Cali khayre.
Khayre oo arintaan dusha kala socda waxa uu difaac ka galay dhuusa-mareeb waxaase dhankooda warmaha qaatay Gudoonka Baarlamaanka oo si wayn u dhacsan siyaasada Madaxweyne Farmaajo iyo in Dalka ay ka dhacdo doorsho qof iyo cod ah.
Mooshin aan la isku sii sheegin hayeeshee la isku habeen dheelmay ayaa hoosta la iska soo galiyay kulankii maanta ee Baarlamaanka waxaana Gdoomiye mursal oo rintaan horboodayay uu sheegay in ay Codeeyeen 178-mudane 170-ka mid ahna ay ogolaadeen halka 8-ay diideen.
Buuqa iyo sawaxanka hareeyay goobta oo keentay in Makaroofanada qaarkood la jaro ma xaqiijin karno sax ahaanshaha in tiradaasi codaysay waxaase Durba soo baxaya Xildhibaano ku doodaya in arintaan ay tahay Waxaba kama jiraa.
Mudanayaal ayaa sheegay in aan wax cod ah la qaadin balse gudoonka natiijo u sii diyaarsaneed uu ku dhaawaaqay.
yeelkeed Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu Dambeyn sheegay in uu aqbalay xil ka xayuubinta Xasan Cali khayre iyo soo magacaabista Ra’iisul wasaare cusub waxaana arintaan ay muujinaysaa in Ra’iisul wasaare khayre oo Bulshada soomaaliyeed aad ula dhacsanayee uu sababsaday ka hor imaanshaha Ololaha Madaxweyne Farmaajo ee Doorasho qof iyo cod si mudo kordhin uu u helo 1-sano ilaa iyo 2-sano.
Waxaa isha lagu wada hayaa Shaqsiga uu soo magacaabi doono Mudane Farmaajo hadii uu ka yimaado dhanka mucaaradkana waxa ay muujinaysaa in bogdhiga kalawareegaan siyaasadeed uu yahay Mudo kororsi.